Ku soo dhawow Prostar
Prostar la qotomiyey 1998, ku takhasusay OEM design iyo tayo sare leh wax soo saarka iyo Prostar brand gaar ah oo warshadaha Uninterruptible Power Supply (UPS), Inverter Power, darfaha Solar, Solar nidaamka jiilka Power iyo Wind Power nidaamka Qarni, iyo Emergency Power Supply ( EPS) iyo sidoo kale batari hogaanka acid dayactirka-free. Prostar leedahay Waaxda Research Design aad u khibrad iyo xirfad leh iyo kuwa si dhow ula macaamiisha shaqeeyaan horumarka wax soo saarka ay sidoo kale la dhigaayo abid ballaarinta kala duwan ee brand Prostar. kooxihii kale waxaa ka mid Quality Control Center, Iibsiga & Production Center, iyo Iibka iyo Adeegga Macaamiisha Centre.Prostar waa wada masuul ka ah horumarinta ganacsiga iyo adeegga ee Shiinaha waynaha. Iyada oo tobankii sano ah dadaalka weyn, Prostar ayaa Boodhkan taxanaha ah ku tilmaamay oo sahay xoog iyo baytariyo si weyn loo isticmaalaa in beerihii maaliyadda, isgaarsiinta, korontada, chemistry shidaalka, maaliyadda iyo canshuuraha ee Shiinaha, oo la si sharaf leh uga hadashay by macaamiisha. Qaadashada iyo samaynta badeecada-heer caalami ah oo leh aragti xirfad carbuunta sidii ay masuuliyad, Prostar ayaa sheegay in daraasad joogto ah iyo hal-abuurnimo in ay ku dadaalaan si ay u koraan shirwaynaha cusub ee mustaqbalkiisa ciyaareed ka. Waxaan kibir eekaan ruuxa "daacadda, Iskaashiga, tartan iyo Hal-abuurka".
kala duwan oo ay ka buuxaan waxyaabaha awood siin, bixiya one-stop iibsiga.
Kooxda Sales Professional
kooxda iibka Professional, oo bixiya adeegyo shakhsi iyo ka go'an.
Prostar waa soo saaraha a sare iyo dhoofinta ee UPS, Inverter, module Solar iyo Battery. Our technology sare iyo xirfad, complete khadadka-soo-saarka, shaqaalaha khibrad iyo nidaamka shirkadaha adag loo hubiyo in our tayada alaabooyinka. Waxaan ku faanaa on alaabta oo tayo leh, adeegga iyo binta, iyo waxay aaminsan yihiin in saddex ka ...
Prostar laftiisa kala shirkadda kale ee awood ay natiijada aan caadi ahayn u koriyo. awoodda aan u leenahay in ay si joogto ah u soo saaraan natiijada waxuu ka yimid our isku darka gaar ah oo ka mid ah faa'iidooyinka soo socda: waayo-aragnimo la ekaan iyo khibrad; bartilmaameedyo lahaansho, ee ugu fiican dhaqanka hababka, iyo shaqo ...
Haddii aad xaqiijinta aad photos qoyska si digital on PC hal guriga, ama malaayiin doolar xogta mission-muhiim ah ama qalab aad server gobolka-of-the-art shirkadda, Prostar ayaa xal u xaqiijiyay. Prostar hore u bixisaa ammaanka iyo nabad-of-maanka in malaayiin users hogaamiye caalami ah ee ilaalinta awood ...
Jadwal hubinta ah awoodda awood lacag la'aan ah oo ah Power Specialist Prostar qiyaasi doonaa baahida awood aad, aqoonsadaan meelaha dhibtu ka iman kara iyo talinaynaa xal kharash-ool ah. Waxa aad heli doontaa: roadmap A leh isbarbardhig design sharaxay; shuruudaha mashruuc oo faahfaahsan, BOMs iyo caddaymaha; Qiimaha ugu hooseeya helitaanka wixii ...
soo saaridda Prostar iyo dhoofinta qiimaha ugu wanaagsan ee la tayo sare leh iyo UPS kharash yar, Inverter, Baytariyada Kaydinta, Guddiyada Solar iyo Solar Power System sanado badan.
20KVA-210KVA qaybsan UPS
1-3KVA UPS hayayaashii Frequency Sare
10-20KVA UPS hayayaashii Frequency High (3: 1)
3KW-10KW Inverter Solar Hybrid
Prostar 3KW off Roobka nidaamka qoraxda ee gurigaaga
nidaamka Prostar awoodi 4kw qoraxda leh baytari ...
nidaamka Prostar 5kw qoraxda oo leh baytari kayd fo ...
Prostar 4000w off Roobka nidaamka qoraxda soo saarka, waayo ...
nidaamka 2kw Prostar qoraxda leh baytariyo guriga
Prostar 3000w nidaamka qoraxda guriga ba kaydinta ...
Prostar 1200w off nidaamka looxaanta Roobka
Prostar 600 watt off Roobka nidaamka qoraxda
Prostar off Roobka nidaamka qoraxda 300W
Prostar 50KVA UPS codsanay in Malaysia Warshadaha ...
Prostar 30KVA UPS codsanay in ay Vietnam Warshadaha ...
Prostar 300KVA UPS codsanay in Nigeria Paper tuwaalka F ...
Prostar 80KVA UPS codsanay in Hong Kong Internationa ...
Years la aasaasay
Years Caalamiga ah ee Ganacsiga
Prostar waa Bixiyaha Solution UPS xirfadle & Energy Expert ee Shiinaha.
UPS ayaa lagu rakibay ee 2015, oo uu ilaa hadda si wanaagsan u shaqeeya, tayada fiican. Sidaasi darteed waxaan qabaa Prostar waa ups soo saaraha lagu kalsoonaan karo oo qeybiyaha. Waa waayo-aragnimo fiican in ay iskaashi la Prostar.
Nguyen Long Mr. Manager Sales
Prostar Low inta jeer ee UPS warshadaha waa mid aad u wanaagsan yahay ilaalinta mashiinada kombaresarada our.
Oo Prostar ayaa had iyo jeer ku foororsatay gadaal si loo daboolo baahiyaha shuruudaha shaqaalaha aan, ay hubaal tahay iibiya doorbido shirkad aan.
Mr. Latoya Zainale Engineer Senior
Prostar UPS loo doortay sababta oo ah xirfad iyo karti si ay u bixiyaan wax soo saarka oo tayo fiican leh, oo ku qancay ka dib-iibka adeegga. Prostar waa iskaashi ka qiimeeyo in aanu sii wadi doonaa in ay iskaashi iyaga la mustaqbalka.
Mr. Volker Mangapis Engineer Senior
ups Prostar waxaa mar kasta la kulmay, xirfad iyo shuruudda ah in laga codsanayaa. Waayo, 5years la soo dhaafay ay ayaa la shuraakoobay shirkadda our, si kalsooni leh ayaan jawaabi kartaa on saaraha Prostar ee UPS.
Callum Wood Mr. Maareeyaha Guud
My warshad ayaa loo isticmaalaa Prostar UPS badan 5years ilaa hadda. Oo waxaan dooran Protar in ay noo cooperator muddo dheer maxaa yeelay, waxay leeyihiin jawaab aad u degdeg ah iyo ficil loogu talagalay macaamiisha, oo ay sameeyaan shaqo weyn ee soo saara ups tayo aad u wanaagsan oo qiimo iyo sidoo. Guud ahaan, Waxaan aad ugu faraxsanahay la xidhiidhka iyo shaqada la Prostar ahay.
Prostar aan nolosha la wadaago ganacsi lagu kalsoonaan karo. tayo wanaagsan iyo hufnaan sare guddi qoraxda la qiimaha tartan rasmi ah ka dhigaysa our ganacsiga koraan si degdeg ah
Prostar siin kartaa dhamaystiran xal nidaamka qoraxda. Waxaan soo iibsaday mid 40kw off Roobka nidaamka qoraxda ee 2012, waxaa si fiican u shaqeeya ilaa haatan. Waxaan jeclaan waxyaabaha Prostar ee.
Mr.Arif Mirza Maareeyaha Guud
Waxay na tuseen line-soo-saarka wanaagsan PV qoraxda booqanaya. Warshad goynta unug qoraxda The, shirkii alxanka, laminator module buuxda iswada-soo-saarka la soo saarka sare. baaritaanka tayada iyo la socodka waa mid aad u adag.
Mr. Md.Akram Hossain Maareeyaha Guud